Steel Surface-Pipeline Coating Removal မှ induction Coating ဖယ်ရှားခြင်း
ပင်မစာမျက်နှာ / ဖယ်ရှားရေး induction ချွတ် / induction Coating ကို Steel Surface မှဖယ်ရှားခြင်း
အမျိုးအစား: ဖယ်ရှားရေး induction ချွတ် Tags: induction အပေါ်ယံပိုင်းဖယ်ရှားရေးကိုဝယ်ကြလော့, အပေါ်ယံလွှာဖယ်ရှားခြင်း, induction အပေါ်ယံပိုင်းဖယ်ရှားရေး, induction အပေါ်ယံပိုင်းဖယ်ရှားရေးအပူပေးစက်, induction အပေါ်ယံပိုင်းဖယ်ရှားရေးစျေးနှုန်း, induction အပူအပေါ်ယံပိုင်းဖယ်ရှားရေး, induction ဆေးသုတ်ဖယ်ရှားရေး, ရော်ဘာဖယ်ရှားသော induction, ပိုက်အပေါ်ယံပိုင်းဖယ်ရှားရေး, ပိုက်ရော်ဘာဖယ်ရှားရေး, ပိုက်လိုင်းအပေါ်ယံပိုင်းဖယ်ရှားရေး, RPR
သံမဏိမျက်နှာပြင်မှ induction Coating ဖယ်ရှားခြင်း -Induction သံချေးဆေးမျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားရေး
ဘယ်လို induction အပေါ်ယံပိုင်းဖယ်ရှားရေး | induction Stripping Works?
induction အပေါ်ယံပိုင်းဖယ်ရှားရေး | induction ချွတ် အပူပေးမျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ induction heating generator သည် electromagnetic field ကိုဖြစ်ပေါ်စေသော induction coil မှတဆင့်လျှပ်စီးကြောင်းကိုပို့လွှတ်သည်။ ဤသည်လယ်ပြင်ထိုကဲ့သို့သောသံမဏိအဖြစ်ပို့ချပစ္စည်းများနှင့်အဆက်အသွယ်အပူသို့ပြောင်းလဲနေသောရေစီးကြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အပူကိုအပေါ်ယံလွှာအောက်တွင်ထုတ်လွှတ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည်အလုပ်ခွင်ရှိပြားချပ်ချပ်များသို့မဟုတ်ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်များကိုကုသရန်အတွက်သင့်တော်ပြီးမည်သည့်အကန့်အသတ်ဖြင့်မျှမလိုအပ်ပါ။
အဆိုပါ induction အပေါ်ယံပိုင်းဖယ်ရှားရေး| induction stripping system သည်ဆေးသုတ်ခြင်း၊ အခြားအကာအရံများ၊ သံချေးများ၊ ဘက်တီးရီးယားယိုယွင်းခြင်းနှင့်ရေနံနှင့်အမဲဆီလျှပ်ကူးမျက်နှာပြင်များ (ferromagnetic သံမဏိ) ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးစွမ်းအင်ကိုအနည်းဆုံးအသုံးပြုသောအင်စတီကျုအတွင်းအကြွင်းအကျန်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
HLQ သည်သင်၏သုတ်ဆေးများကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည့်အခြားပြောင်းလဲသောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည့် Induction Stripping! HLQ ၏သော induction ချွတ်စက်သည်သင်၏အဆိုးရွားဆုံးသောအင်္ကျီများကိုသံမဏိကိုယ်ထည်မှဆူညံသံသို့မဟုတ်ဒုတိယစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမရှိသောကြောင့်ဖယ်ရှားပေးသည်။
သင်၏အဖုံးများဖယ်ရှားပေးသည့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းများကိုဖြေရှင်းရန်မှော်အုန်းတောင့်ကိုရှာလိုပါက HLQ တွင်နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုရှိသည်။ HLQ နည်းပညာပညာရှင်သည်သင်၏သော့ချပ်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သော induction wand ကိုလှိုင်းတံပိုးသုတ်ခြင်းနှင့်သဲသုတ်ခြင်းကဲ့သို့ယှဉ်ပြိုင်သည့်နည်းပညာများထက် ၁၀ ဆပိုမိုမြန်သောနှုန်းများဖြင့်ဖုံးအုပ်မှုများကိုဖယ်ရှားရန်အခက်ခဲဆုံးအချို့ကိုဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မှော်ဆန်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ induction stripping technology သည်အနီးကပ်ဒုတိယစက္ကန့်ဖြစ်သည် ! HLQ ပညာရှင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ induction head ကိုသံမဏိမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရွှေ့သောအခါအပူချိန် (ပုံမှန်အားဖြင့် ၃၀၀ မှ ၄၀၀ ဒီဂရီ) အားတင့်ကားများ၊ ရေနံတင်သင်္ဘောများ၊ ပိုက်လိုင်းများ၊ သင်္ဘောများနှင့်ကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းများမှအလွှာအများစုကိုအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး ၁ လက်မအထူအထိရှိသည်။ စာရွက်များအတွက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်။
RPR အပူသော induction Coating ဖယ်ရှားရေး
RPR အပူသော induction အပေါ်ယံပိုင်းဖယ်ရှားရေး သော induction ၏နိယာမအားဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ်။ အပူကိုသံမဏိအလွှာတွင်ထုတ်လုပ်ပြီးသံမဏိနှင့်အဖုံးမျက်နှာပြင်ရှိနှောင်ကြိုးသည်ပျက်သွားသည်။ ထို့နောက်အညစ်အကြေးများကိုလုံးဝမဖယ်ရှားဘဲညစ်ညမ်းစေသည့်အေးဂျင့်များလုံးဝဖယ်ရှားသည်။ ပေါက်ကွဲမှုမီဒီယာ။ ထို့ကြောင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။
အနိမ့်ဆုံးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်အတူအထူဆုံးနှင့်အခက်ခဲဆုံးကုတ်အင်္ကျီများကိုပင်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ RPR အပူသော induction သမားရိုးကျနည်းလမ်းများထက်ပိုမိုမြန်သည်။ ဖုံးအုပ်ဖယ်ရှားခြင်း၏တိတ်ဆိတ်သောနည်းလမ်းကကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည်ဆူညံမှုညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲနေ့ရောညပါလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ induction heat လုပ်ငန်း၏အားသာချက်များစွာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ Alliance ဖောက်သည်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများမှဖောက်သည်များနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်:
စားနပ်ရိက္ခာ & အဖျော်ယမကာအပြောင်းအလဲနဲ့
ဟိုတယ် & hosp ည့်ဝတ်ပြုခြင်း
HLQ ၏မေးရိုးကျဆင်းမှုသော induction dis-bonding လုပ်ငန်းစဉ်သည်အောက်ပါတို့အပါအ ၀ င်အပေါ်ယံလွှာအမျိုးအစားများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
Chartek မီးသတ်သို့မဟုတ်အခြား intumescent အပေါ်ယံပိုင်း
ပိုမိုမြန်ဆန်သော၊ တိတ်ဆိတ်သော၊ သန့်ရှင်းသော၊
အချို့က induction stripping သည်“ မြန်ဆန်ပြီးညစ်ပတ်သော” အလုပ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသော်လည်းအမှန်အတိုင်းပြောရလျှင်၎င်းသည်မြန်ဆန်ပြီးရှုပ်ထွေးမှုလုံးဝမဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် induction အဝတ်အစားချွတ်ခြင်းသည်ဒုတိယအစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမဟုတ်သောကြောင့်သန့်ရှင်းရေးကိုရိုးရှင်းစေသည်။ စာရွက်များနှင့်အပေါ်ယံလွှာများဖြင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းသည်ပေါက်ကွဲသောမီဒီယာများနှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုကိုင်တွယ်ခြင်းထက်အတိုင်းထက်အလွန်လွယ်ကူသည်။
များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်ကွန်တိန်နာကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အကုန်အကျများသောငြမ်းနှင့်ထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းကိုဖယ်ရှားပြီး snorkel ဓာတ်လှေကားနှင့်အထည်စက်ဖြင့်အစားထိုးသည်ဆိုပါစို့။
အခြားအရောင်းအ ၀ ယ်များသည် HLQ ၏ induction ချွတ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သင်၏စီမံကိန်းတွင်သင်လုပ်ကိုင်နေသည့်အခြားကန်ထရိုက်တာများ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ဆိုးဝါးသောဆူညံသံများကိုဖန်တီးနိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သော induction ချွတ်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများတွင်ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများမရှိပါ။ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများ၊ အခြားကန်ထရိုက်တာများ၊ ဖောက်သည်များ၊
RPR induction သည်လျှပ်ကူးမျက်နှာပြင်များမှ (စတီးလ်စသည်တို့) မှသုတ်ဆေး၊ သုတ်ဆေး၊ သံချေး၊ ဘက်တီးရီးယားချေးများနှင့်ဆီနှင့်အမဲဆီအကြွင်းအကျန်များကိုဖယ်ရှားပစ်မည့်ပစ္စည်းနှင့်မျက်နှာပြင်ကိုထိန်းချုပ်ထားသော၊ - စွမ်းအင်၏မိခင်စားသုံးမှု။
အဆိုပါ သော induction အပူနိယာမ
အဆိုပါ RPR သော induction မီးစက်တစ်ခုမှတဆင့်ပြောင်းလဲလက်ရှိပေးပို့သည် သော induction အပူကွိုင်, သော electro- သံလိုက်စက်ကွင်း ates gener- သော။ ဒီသံလိုက်စက်ကွင်းသည်သံမဏိကဲ့သို့သောလျှပ်စီးစီးဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သံမဏိ၏ခုခံမှုကြောင့်၎င်းလျှပ်စီးကြောင်းများသည်အပူ = induction heat သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ အပူကိုကုတ်အင်္ကျီအောက်တွင်ထုတ်လွှတ်ပြီးအမြန်သန့်ရှင်းစွာခွဲထုတ်နိုင်သည်။
RPR Heat induction သည် induction နိယာမအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ အပူကိုသံမဏိအလွှာတွင်ထုတ်လုပ်ပြီးသံမဏိနှင့်အဖုံးမျက်နှာပြင်ရှိနှောင်ကြိုးသည်ပျက်သွားသည်။ ထို့နောက်မျက်နှာပြင်ကိုလုံးဝမဖယ်ရှားဘဲဖယ်ရှားပစ်ပြီးညစ်ညမ်းစေသောအေးဂျင့်များလုံးဝဖယ်ရှားသည်။ ပေါက်ကွဲမှုမီဒီယာ။ ထို့ကြောင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။
အနိမ့်ဆုံးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်အတူအထူဆုံးနှင့်အခက်ခဲဆုံးကုတ်အင်္ကျီများကိုပင်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ RPR အပူ induction အပူ သမားရိုးကျနည်းလမ်းများထက်ပိုမိုမြန်သည်။ ဖုံးအုပ်ဖယ်ရှားခြင်း၏တိတ်ဆိတ်သောနည်းလမ်းကကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည်ဆူညံမှုညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲနေ့နှင့်ညညလည်ပတ်နိုင်သည်။
RPR စနစ်သည်ဆေးကြောခြင်း၊ သံချေးခြင်းနှင့်အခြားအကာအရံများ (vulcanized Rubber, fire protectant, epoxies စသည်ဖြင့်) ကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
အထက်ပါ setting ကိုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ, RPR မညီမျှမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကယ်တင်နှင့်စတီးအလွှာကနေကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သော, ဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်းဖယ်ရှားရေးများအတွက်ရွေးချယ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။
RPR သည်ရေကြောင်း၊ တင့်ကားများ၊ ကမ်းလွန်နှင့်ကုန်းတွင်းပိုင်းပိုက်လိုင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
induction Coating Machine & induction Coating ဖယ်ရှားရေးစက် & RPR သော induction စနစ်
RPR Induction ပိုက်လိုင်း Coating ဖယ်ရှားရေးလျှောက်လွှာ